Sagaal buudh shaqo oo raaxo leh waxaad ugu baahan tahay xirmada kabahaaga | Ragga Stylish
Adag oo raaxo leh, kabaha shaqada shaki kuma jiro inay ka mid yihiin kabaha lagama maarmaanka u ah deyrta / jiilaalka. Kala duwanaanshahoodu waxay ka dhigan tahay inaad ku dari karto nooc kasta oo surwaal ah, oo ay ku jiraan saraawiisha dharka haddii aad ku raacdo iyaga dharka saxda ah.
Haddii aad ka fiirsaneyso inaad qaar ku darto xirmada kabahaaga, Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad tixgeliso moodooyinka saxiixan ee soo socda, oo aan u kala soocnay qaab si ay kaaga caawiso inaad go'aanka ka dhigto mid fudud:
1 Kabaha qaabka militariga
2 Bootsiyada qaabka Moccasin
3 Kabaha qaabka Mountaineer
Kabaha qaabka militariga
Mr Porter, 695 XNUMX
Prada wuxuu soo jeedinayaa fasalada kabaha ragga Maqaarka Khadadka Dr Martens, laakiin leh taabasho aad ufiican. Yeezy wuxuu doortaa suede iyo qaabab jilicsan xusuusinaya kabaha isboortiga, halka Visvim ay isku dareyso maqaar madow oo leh shiraac cagaaran oo milatari.
Bootsiyada qaabka Moccasin
Kabaha Bisha Cas
Mr Porter, 340 XNUMX
Mr Porter, 1.190 XNUMX
Haddii aad rabto inaad daacadnimadooda ku sii ahaato, kabaha moccasin Waxay koox weyn ka sameysan doonaan surwaalkaaga jiiniska ah iyo shaararkaaga caagga ah / boodboodayaasha dhejiska leh. Waxaad sidoo kale ku dari kartaa surwaal xamuul ah. Haddii aad rabto inaad ku darto iyaga oo ku jira muuqaal caadi ah, waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaato inaysan si xun ula shaqeyneynin chinos iyo shaati-xirmooyinka badhanka-hoose.
Midab madow, dhuxul iyo madow. Kuwani waa saddexda midab ee ay soo jeediyeen shirkadaha Yuketen, Red Wing Shoes iyo Tom Ford, siday u kala horreeyaan, kuwan kabo adag oo xoog badan.
Kabaha qaabka Mountaineer
Ciyaaraha Fashion, € 890
Mr Porter, 650 XNUMX
Mr Porter, 990 XNUMX
Qaabka buurta loo fuulo ayaa ah isbeddel dayrta / jiilaalka, sidaa darteed waan ku guuldareysan karnay inaan ku darno kabaha qaar fasalkan xulashada.
Kabaha buurta ee hadda jira ayaa loo qaybiyaa naqshadda caadiga ah iyo moodooyinka loogu talagalay asfalt-ka marka loo eego dhagxaanta. Prada wuxuu udhaxeeyaa kalabar inta udhaxeysa labada geesood, oo leh kabo ku dhufanaya isku dheelitirnaan sahlan oo udhaxeysa shaqeynta iyo hagaajinta
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Kabaha shaqada ugu fiican ee ay sameeyeen noocyada raaxada